यस्तै हो भने नेपालमा पनि एक दिन संयुक्त राष्ट्रको शान्ति मिसन नआउला भन्न सकिन्न ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»विचार/ब्लग»यस्तै हो भने नेपालमा पनि एक दिन संयुक्त राष्ट्रको शान्ति मिसन नआउला भन्न सकिन्न !
यस्तै हो भने नेपालमा पनि एक दिन संयुक्त राष्ट्रको शान्ति मिसन नआउला भन्न सकिन्न !
By सन्दीप खत्री on २५ चैत्र २०७४, आईतवार ११:१८ विचार/ब्लग
पिएनपिखबर: अज्ञात समुहको गोली प्रहारबाट हिन्दु धर्म गुरु आचार्य श्रीनिवास घाईते भएसंगै मुलुकमा जातियता र धार्मिक मुद्धा उत्कर्षमा पुगेको भान हुन थालेको छ । मोरङको जतुवामा आइतवारदेखि शुरु हुन लागेको श्रीमद भागवत पूराण कार्यक्रममा मुख्य वाचकका रुपमा आचार्य रामजानकी मन्दिरमा पुगेका थिए। घाइते आचार्यको विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
हिन्दुहरु धर्म जोगाउने भन्दै नारा लगाएर हिडिरहेको समयमा हिन्दुहरुलाई अब ज्यान जोगाउन समेत गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ। हिन्दु धर्मको नाममा राजनीति गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तिनै समुहले घटनाको निन्दा गरेतापनि धर्मको नाममा राजनीति गरेर जनतामा थोरै भएको आस्थालाई समेत हटाउन मद्धत गर्नेबाहेक अरु काम गर्नसकेको छैन।
आर्थिक प्रलोभनमा पारि धर्म परिवर्तन गराउदै हिड्ने जमातलाई रोक्न नसक्नु नारा लगाउन मात्रै जान्ने संघ संस्था र सत्ताका भोगी नेता अनि अदुरदर्शी राज्य पक्षको कमजोरी हो। यसको फाइदा उठाउदै विखण्डनकारीहरु धर्म र जातको नाममा करोडौ डलरको प्रलोभनमा परि समाज बिखन्डन गरि गृहयुद्ध निम्त्याउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ मा संलग्न भैरहेका छन।
आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने कमजोर मानसिकता भएका नेपालीहरु पनि बिखण्डनकारीलाई खुलेयाम सहयोग गरिरहेका छन। वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने इसाई धर्म प्रचार गर्नेहरुले प्रतिव्यक्ति १० लाख दिने हो भने बिहानदेखि पुजाआजा गरि रातो टिका लगाई ‘रामराम’ जप्ने ६०% भन्दा बढी हिन्दुहरु ‘जिसस’ को नाममा निधार खाली राख्न समेत तयार हुन्छन। यो रकमलाई बढाएर ३० लाख मात्र पुर्याउने हो भने ९९% हिन्दुहरु इसाई हुनेछन।
समाजको संस्कार, रितिरिवाज र धर्मको प्रचार, बिकास र सम्बर्द्धन गर्नु आआफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी, कर्तब्य र अधिकारको बिषय हो। तर नेपाली समाजलाई खण्डित गर्नको लागि अराजक मानसिकता भएकाहरुले एक आपसमा द्वन्द्व गराउन एकपछि अर्को कदम अगाडी बढाइरहेको अवस्था छ। बर्षौदेखि हरेक क्षेत्रमा सहिष्णुता कायम रहेको नेपाली समाजमा धर्म र जात लाई लिएर डलरको भरमा आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न लागिपरेका विखण्डनकारीहरु सलबलाईरहेको समयमा राज्य पक्षबाट कुनै ठोस कदम भने चालिएको छैन।
हिन्दु गुरु श्रीनिवास आचार्यमाथि भएको आजको घटना पहिलो होईन । यस अघि पनि गुरु नारायण पोखरेलको हत्या गरिएकै हो । साथै विभिन्न प्रकारले हिन्दुत्वमाथि प्रहार भैरहेको छ । यस्ताखाले निरन्तरको प्रहारलाई हिन्दू र हिन्दूवादी संघसंगठन प्रतिकारमा उत्रने, राज्यले दोषीमाथि कारवाही गरेन भनि बिरोधमा उत्रने हो भने देश गृहयुद्धको चपेटामा पर्ने निश्चित प्राय छ ।
अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिले कोरिया, मेलेसिया र अरबबाट पठाएको रेमिटेन्सले देश चलेको अवस्थामा समाजलाई निर्देशित गर्न सनातन पद्धतिलाई अबलम्बन गरिनुपर्नेमा झन त्यहि पद्धतिलाई समाप्त गर्ने र मुलुकलाई बिखण्डन गर्ने उद्देश्यले हाम्रो धर्म, संस्कृति माथी एक पछी अर्को प्रहार गरिदैछ ।
आतंक र धार्मिक द्वन्द फैलाउने उधेश्यले गरिएको यस्तो कार्य विखण्डनकारीको षड्यन्त्र हो। यो नेपालको कानुन विपरित पनि छ । नेपालको संविधानले सबै नेपालीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिएता पनि एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई निषेध गर्ने गरि कुनै पनि अवाञ्छित कार्य गर्न भने छुट दिएको छैन । यस्तो किसिमको गतिविधि वा वक्तव्यले समाजलाई विखण्डनतर्फ लाने काम गर्दछ । आवेशमा आएर हिन्दुहरु प्रतिकारमा उत्रने हो भने विदेशीहरुको उद्देश्यलाई पुरा गर्न मलजलको काम गर्दछ । सबै नेपालीले यस्तो किसिमको षडयन्त्रप्रति सचेत हुन जरुरी छ ।
अहिलेको अवस्थामा सबैले विवेक नगुमाई समाजलाई द्वन्दतर्फ जानबाट रोक्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । एउटाले गरेको गलत कार्यलाई अर्कोको गलत कार्यले कहिले सच्चाउन सक्दैन । बरु यसले विनास तर्फ लैजान्छ । तसर्थ सबैले यस्तो किसिमको गतिविधि र कार्य हुन नदिन र भएमा शान्तिपुर्ण तबरबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपालमा पनि एक दिन संयुक्त राष्ट्रको शान्ति मिसन आउने पर्ने अवस्था बन्नेछ ।